အမွှာညီမျှခြင်း၊ Audio Analyzer နှင့် Fade effect တို့ဖြစ်သည် Linux မှ
Amarok ရှိ Equalizer, Audio Analyzer နှင့် Fade effect တို့ဖြစ်သည်
အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်သင့်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြ(နာသည်၎င်း (သို့) သူတို့သိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သိလိုက်ရုံနှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အခြေအနေတူတူဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်နှင့်မျှဝေရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ပြproblemနာကငါသုံးကတည်းက KDE ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါညီမျှငါ့ကိုလုပ်ကြံလေ၏ Amarok ပိတ်ထားသည် ယေဘုယျအားဖြင့်အစဉ်မပြတ်ငါအသုံးပြုခဲ့သည် Clementineကောင်းပြီ၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကမှငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
KDE ခေါ် Audio နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်များအတွက်မူဘောင်ကိုအသုံးပြုသည် ဖိုနွန်, ငါတို့ install သောအခါ ArchLinux နှင့် KDEကမူဘောင်အတွက်မည်သည့်အင်ဂျင်ကိုသုံးရမည်ကိုအမြဲတမ်းမေးမြန်းသည်
ပုံမှန်အားဖြင့်လာပါတယ် phonon-vlc ကံမကောင်းတာကဒီအင်ဂျင်ကခွင့်မပြုပါဘူး Amarok ညီမျှခြင်းကိုသုံးပါ။ အဖြေ? ကောင်းပြီ၊ phonon-gstreamer ကို Install လုပ်ပါ.
$ sudo pacman -S phonon-gstreamer
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် debian ဖြစ်ရမည်:
ဒီအထုပ်ကို install လုပ်တဲ့အခါ debian နှင့် KDE ၄.၉၎င်းသည်အလိုအလျောက်ရရှိသည် GStreamer အတွက်ပုံမှန်အင်ဂျင်အဖြစ် System Preferences » Multimedia » Phonon »အင်ဂျင်။
သို့သော်၏အမှု၌ ArchLinux နှင့် KDE ၄.၉ ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျက default ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ် System Preferences » Multimedia » Audio နှင့် Video Preferences » Engine, ထွက် log နှင့်နောက်တဖန် log ။
ခဏ မှစ. , Amarok ကျွန်တော်ထပ်ထည့်တယ် Audio Analyzer၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ နွမ်း နှင့်သင်တန်း၏ထို option ကိုသုံးပါ ညီမျှခြင်း.
ဒီမှာအကြောင်းပြချက်သုံးခုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုသေးသေးလေးပါ။ ပထမတစ်ခုမှာအုပ်စုများကိုစမ်းသပ်ရန် Vimeo စီမံကိန်းအတွက် @ 10enFromLinux။ ဒုတိယ၊ အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ တတိယအချက်မှာဗွီဒီယိုများသည်ဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မည်သို့ကြည့်မည်ကိုကြည့်ရှုရန်၊ မည်သည့်အတွေးအခေါ်၊ အကြံပြုချက်သို့မဟုတ်ဝေဖန်မှုကိုမဆိုလက်ခံလိမ့်မည်😛
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Amarok ရှိ Equalizer, Audio Analyzer နှင့် Fade effect တို့ဖြစ်သည်
24 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Phonon vlc သည် Amarok ရှိ Updater ကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများကိုအထောက်အပံ့မပေးနိုင်ခြင်းမှာ gstreamer ထက်အသံအရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ အသံအရည်အသွေးကိုငါမနှိုင်းယှဉ်နိုင်ဘူး။ မင်းဘယ်လိုသိလဲ။
ကောင်းပြီ၊ အကြောင်းမှာ VLC phonon သည် VLC player တွင်တွေ့နိုင်သော filter များနှင့်တိုးတက်မှုများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်သင် bluray ရင်းမြစ်များမှအရည်အသွေးမြင့်အော်ဒီယိုများကစားနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ PC တွေအတွက် laptop တွေဒါမှမဟုတ် built-in built-in စပီကာတွေဟာ mp3 96 kbps နဲ့ဖွင့်လို့မရဘူး။
နောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကတော့ FLAC, ALAC (သို့) CD တို့လိုအမျိုးအစားတွေကိုဖွင့်ဖို့သင့်မှာအလယ်အလတ်တန်းစားအသံကဒ် (ကောင်းသော DAC + အသံချဲ့စက်)၊ စပီကာများ (သို့) နားကြပ်မော်နီတာများရှိရင်ဖြစ်တယ်။
Mmm စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီအသံရဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလုံးဝ neophyte ပါ။
vlc-gstreamer သည် kde-gnome ကဲ့သို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ Gstreamer သည်တရား ၀ င်အကြောင်းပြချက်များအတွက် Bluray (နှင့်အခြားမူပိုင်ခွင့်များပါ ၀ င်သူများ) ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သူတို့ရောင်းဝယ်စွာရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ Gstreamer အသိုင်းအဝိုင်းသည်ပိုမိုကြီးမားသည်၊ သူတို့သည်စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးကိုပံ့ပိုးပေးကြသည်။ သင်ဖော်ပြခဲ့သောစာမျက်နှာ linux အတွက်သာပြောသော်လည်းထူးခြားသည်မှာဝီကီပီးဒီးယားက“ Cross-platform ဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Linux (x86, PowerPC နှင့် ARM), Solaris (Intel နှင့် SPARC) တွင်အလုပ်လုပ်သည်ဟုဆိုသည်။ စသည် အသံကိုဘယ်လိုကြားရလဲဆိုတာဟာပုဂ္ဂလဒိand္ဌာန်ကျပြီးကိုယ်တိုင်ရည်ညွှန်းတဲ့ပြissueနာတခုဖြစ်တယ်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်တွင်ပုဂ္ဂလဒိwas္ဌာန်ရှိသည်ဟုမထင်ပါ၊ ပိုမိုမြင့်မားသောဖိုင်များကိုပုံတူအဖြစ် bitrate၊ filter များ (ဆူညံသံ၊ ပုံမှန်နှင့်အခြားအရာများလျှော့ချရန်) ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်ကြောင်းရှင်းပြပါ။ ဒါတွေအားလုံးဟာကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ထင်ဟပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်မဟုတ်ပါဘူး။
မည်သည့်မာလ်တီမီဒီယာပုံစံမျိုးတွင်မဆိုကွဲပြားခြားနားသောချုံ့မှုပုံစံများကို၎င်းပုံစံများပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
RAW ဖိုင်သည် JPG ထက်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်ကိုထောက်ကူပေးသည်။ အမြဲတမ်းသတိမပြုမိသော်လည်းအရေးကြီးသည့်အရာမှာအပိုစွမ်းရည်တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လိုအပ်လျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
တဖန်သင်တို့ပြောသကဲ့သို့, က KDE-Gnome ဆင်တူမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းကဲ့သို့သောပုဂ္ဂလဒိissues္ဌာန်ပြissuesနာများကိုဘေးဖယ်ထားလျှင် KDE သည်ထိပ်ပိုင်းတွင်ရှိနေပြီး၎င်းသည် modular ဖြစ်ကာ Gnome တွင်မရှိသောအပိုအရာများရှိနေသည်။
မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ရုံနဲ့ gstreamer fluendo အကြောင်းဘာမှမသိဘူး။ mp3 အတွက်ခြားနားချက်သည်အလွန်ကြီးမားသည်၊ ၎င်းသည်ဘေ့စ်ကိုကောင်းစွာရောက်ရှိနိုင်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အခမဲ့အစိတ်အပိုင်းသည် debian တွင်ဖြစ်သည်။ လိုင်းများကို windows7၏ပုံစံတွင်သီးခြားခွဲရန် pulseaudio ကိုကျွန်ုပ်ထပ်ထည့်သည်၊ kde နှင့်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆင်မပြေကြောင်းဖတ်ခဲ့ဖူးသည် ဒါကြောင့် KDE, vlc နဲ့ alsa သုံးမျိုးကိုသုံးတာပေါ့
ငါကအခြားလမ်းန်းကျင်, gstreamer + pulseaudio, မအောင်မြင်နိုင်သောစုံတွဲ။ သို့သော်အသံသည်ဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂလဒိarea္areaရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်
အကယ်၍ သင်သည် Beats Audio ဖြင့်ဂီတကိုစတင်နားထောင်ပါကသင်သည်အမြောက်အမြားနှင့်ဘေ့စ်များကိုအလျင်အမြန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသင်သည် BeyerDynamic ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေးနှင့်ကျွမ်းကျင်သောအသံကဒ်ကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
Elav ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်အမြဲသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ပေးခြင်း
ငါ့ကိုကြိုဆိုပါတယ်၊ ငါနဲ့ထပ်တူထပ်မျှသံသယရှိသူတစ်ယောက်အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ။ 😉
Elav ဒေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ယခုအချို့သော KDE ဖြန့်ချိမှုများတွင်အချို့သောအပလီကေးရှင်းများတွင်အသံသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြောင်းယခုနားလည်ပါပြီ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏အသံကဒ်သည်အနည်းငယ်ပိုကောင်းသောအသံ "Amarok" နှင့်အသံထွက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုကို Vimeo တွင်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သောသင်ခန်းစာအကြောင်း upload လုပ်ခဲ့လားကြည့်ရအောင် (ကျွန်ုပ် webcam နှင့်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာမိုက်ခရိုဖုန်းဝယ်သည်နှင့်ချက်ချင်း)
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အသံမဟုတ်ဘဲ၊ NSA U_U ဒေတာဘေ့စ်ထဲသို့၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းမပြုရန်၎င်းကို filter များနှင့်သက်ရောက်မှုများထည့်ထားသည်။
ဟားဟား! ခဏတော့မင်းအသံအရမ်းမြင့်တယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်၏အသံကိုမည်သို့ထုတ်ဖော်မည်ကိုသိသောကြောင့်သူတို့က၎င်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ... NSA သည်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူများအား XD ဘာလုပ်သည်ကိုသိရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားသည်
ကောင်းပြီ၊ အနည်းဆုံးသူတို့၏ဆာဗာများသူတို့အသုံးပြုတော့မည်ဟုကောလဟာလများထွက်နေသည် (မထင်ပါ)
ahh elav; Debian တည်ငြိမ်မှုရှိပါသလား (kde 4.8 အတွက်) ။ netbook မှာပြနာကြီးတစ်ခုကကျွန်တော့်ကိုပေးတယ်။ Kwin တွားသွားတယ်။ ဂရပ်ဖစ်သည်ဤ netbook များမှဂန္ထဝင်ဉာဏ်ဖြစ်သည် ငါတည်ငြိမ်တဲ့စနစ်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ပျက်စရာပဲ၊ အခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်တော့မယ်။ လေးစားပါတယ်
ဒီဟာကကားမောင်းတဲ့ပြproblemsနာပါ။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာတော့ Debian Wheezy ကို ၂၀၀၆ HP DC5570 ကွန်ပျူတာထဲမှာ install လုပ်ထားတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပြproblemsနာအများကြီးမရှိခဲ့ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းခွင်၌ Debian Stable ရှိပြီး KDE သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။
ငါတို့တောင်မှရှိတယ်။ Debian Wheezy တွင် KDE 4.8.4 သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ငါ KDE ကိုအကြိမ်ကြိမ်သုံးဖူးတယ်၊ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ဒါကကျွန်တော့်သူဌေးကပြောတာကသူတို့ကို xD သိသူတွေအတွက်လွယ်ကူပါတယ်
ငါတစ်ချိန်ချိန် Amarok ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုမြင်ဘူး ။__ ။
Xfdesktop 4.11 နှင့်အခြား Xfce အစိတ်အပိုင်းများကိုရရှိနိုင်သည်